Uyisebenzisa kanjani i-Sticker Quiz kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 2, 2019 0 IiCententarios 1239
I-Instagram ikhuphe i-hashtag entsha yamabali ayo adumileyo. Eyaziwa njenge-Quiz, okanye i-Quiz yesitikha, ijoyina usapho olunxibelelanayo lweepolls, ithegi yemibuzo, kunye nesilayida se-emoji. Kwaye namhlanje siyakuxelela Uyisebenzisa njani isincamathelisi se-Quiz kwi-Instagram.
Ngaphambili, abasebenzisi abaninzi banokusebenzisa iitemplate zamabali e-Instagram kwimibuzo, kodwa ngoku sinento eyakhelweyo esisebenzisanayo. Ilebheli yemibuzo yindibaniselwano yophando kunye neelebheli zemibuzo, kodwa yahlukile kuzo zombini njengoko kuchaziwe ngezantsi. Omnye umahluko ophambili kukuba kufuneka uyazi impendulo ngokwakho. Ngaphandle koko akukho sizathu sokongeza le thegi.
Ke yintoni le thegi yovavanyo kunye nendlela yokuyisebenzisa kumabali e-Instagram? Fumana zonke iimpendulo apha.
1 YINTONI ISIQINISEKISO SEXESHA?
Sonke sithathe inxaxheba kwiimvavanyo ezithile ngeentsuku zethu zesikolo. I-Instagram ayifuni ukuba silibale ngezo ntsuku zintle kwaye ke bayikhupha le ncamathelisi intsha. Yintlekisa!
Kwinqaku elibi, ithegi isebenza ngokuchanekileyo njengemibuzo eqhelekileyo. Umdali unikezela iimpendulo ezininzi zokhetho kwaye abalandeli mabakhethe enye.
Nje ukuba benze oko, baya kuboniswa ukuba impendulo ichanekile okanye ayichanekanga. Ifomathi iyafana ne "Ngubani ofuna ukuba yi-Milionea" uthotho lomdlalo, ngaphandle kokuba awuyi kuphumelela nantoni na.
2 USETYENZISWA NJANI I-SIZER Quiz KWI-INSTAGRAM
Qalisa usetyenziso lwe-Instagram kwaye ucofe i-icon yeNdaba yakho ukuqala ukwenza ibali elitsha. Unokucofa kwi icon yekhamera ephezulu. Emva koko, bamba ifoto entsha okanye ukhethe esele ikho kwaye ucofe uphawu lwethegi.
Ukusuka kwitreyi yesitikha, cofa kwiphepha lemibuzo. Ilebheli yovavanyo engenanto iya kongezwa.
3 Thumela IGAMA LOMNQOPHISO
Nje ukuba ithegi yovavanyo yongezwa, uya kubona uphawu lokubhala. Bhala umbuzo wakho.
4 IIMPENDULO ZONGEZIWEYO
Ithegi yemibuzo ikuvumela ukuba ungeze kwiimpendulo ezine okanye ukhetho. Ngokuzenzekelayo, uya kubona kuphela izithuba zeempendulo ezimbini, elona mfuno zisezantsi. Xa ugcwalisa zombini, owesithathu uya kuvela ngokuzenzekelayo aze owesine xa owesithathu engenanto.
IBHUNGA : Unokongeza ii-emojis njengeempendulo.
5 KHETHA IMPENDULO
Ukwazi impendulo echanekileyo kubalulekile kukhuphiswano lokuziphatha. Xa usenza imibuzo, kuya kufuneka kuqala ukhethe impendulo echanekileyo. Ukwenza njalo, cofa kwi-A, B, C, D kunye nakwicala lasekhohlo lempendulo. Impendulo echanekileyo iboniswe eluhlaza kuwe.
6 UTSHINTSHO UMQOQO WEKHODI YENKOLO
Njengazo zonke izitikha kwi-Instagram, unokwenza umbala wesitikha sovavanyo. Ngenxa yoko, cofa umbala wepeyinti yombala phezulu ukuze utshintshe phakathi kwemibala eyahlukeneyo. Okwangoku, awunakukhetha umbala wesiko ngesandla.
Yiyo leyo. Cofa iqhosha elenziweyo ukongeza ithegi entsha kwibali lakho.
7 UKUZIPHATHA KUNYE NESICWANGCISO SESIQINISEKISO
Njengombukeli, ukuba ubona itekisi yokuvavanya, konke okufuneka ukwenze kukucofa ukhetho ocinga ukuba luchanekile. Iziphumo ziya kuboniswa kuwe kwangoko ukuba impendulo yakho ichanekile okanye ayichanekanga. Luhlaza lubonisa impendulo echanekileyo, kwaye obomvu kuthetha ukungachaneki.
QAPHELA: I Ithegi yomncintiswano ayaziwa. Umdali unokubona ukhetho olukhethileyo.
8 Guqula ISIMPENDULO sakho
Ngelishwa, nje ukuba uchukumise impendulo, ngekhe uyitshintshe. Ke lumka kwaye ucinge kabini ngaphambi kokuba uphendule umbuzo.
9 BONA IIMPENDULO ZAKHO BALANDELAYO
Emva kokuba ibali lesitikha sokuvavanya liphelile kwaye liyasebenza, ungabona inani leevoti ezifunyenweyo kukhetho ngalunye kwaye umntu ngamnye uvotele ntoni. Iimpendulo ziya kubonakala kwibali ngokwazo kwaye azizukufika njengomyalezo kwiMiyalezo ngqo (DM).
Ukuzibona, vula ibali elipapashiweyo kwaye ubetha ukuJongwa ngokhetho emazantsi. Apha uya kubona iivoti kunye neempendulo ezinikezwe ngumsebenzisi ngamnye onxibelelane nethegi.
10 LUYAVUYALASELWA NJANI I-LABEL YOKUHLAZIYWA KOKUGQIBELA KWABASEBENZI
Kwabaqalayo, ileyibhile yophando ilinganiselwe kukhetho ezimbini kuphela. Kule ilebhile, akufuneki uyazi impendulo ngokwakho. Yindlela elungileyo yokufumana impendulo ngokusekwe kwezona voti zininzi.
Ungayisebenzisa ukufumanisa ukuba abalandeli bakho bacinga ntoni ngento ethile. Umzekelo, babuze ukuba bayalithanda ihlobo okanye ixesha lasebusika okanye ukuba bakhetha i-Android okanye i-iPhone.
Umbuzo welebheli yovavanyo kwimeko efanayo iya kuba kukubeka i-logo ye-Apple kwaye ubuze abalandeli bakho ukuba baqashele inkqubo yokusebenza. Xa bachukumisa ukhetho, baya kubona impendulo echanekileyo kwangoko. Izinto zahlukile kwileyibhile yophando kuba baya kubona kuphela ipesenti yempendulo nganye.
11 IYAHLUKANYISELWE NGALO MBUZO WEMIBUZO
Ithegi yemibuzo inokusetyenziswa ngeendlela ezimbini. Okokuqala, ungavumela abalandeli bakho bakubuze umbuzo ngokusekwe kwimeko apho uphendula khona imibuzo yabo. Umzekelo, xa useluhambeni, ungabonisa ibali elinombuzo kwaye ubuze abasebenzisi ukuba bafuna ukwazi nantoni na malunga nendawo.
Kwindlela yesibini, ubuza umbuzo kwaye abalandeli bakho baya kuwuphendula ngaphandle kokubanika naluphi na ukhetho, njengakwisaveyi okanye kwiithegi zemibuzo. Umzekelo, bacele iingcebiso malunga nefowuni ekufuneka uyithengile.
Ngokusisiseko, awunakho ukubonisa ukhetho kubalandeli bakho usebenzisa isitikha semibuzo. Kwakhona, akukho lungelo okanye gwenxa kwileyibhile yombuzo. Yindlela nje yokwazi into okanye ukufumana ulwazi.
12 Yongeza IZIQULATHO ZABANINZI
Into enomdla kukuba ungongeza indibaniselwano yezincamathelisi ezisebenzisanayo kumabali akho. Oko kukuthi, unokuba ne-poll, imibuzo, kunye ne-tag yemibuzo kwisithuba sebali. Nangona kunjalo, ayizukuvakala. Kungcono ukuzisebenzisa ngokwahlukeneyo kwaye uzisebenzise kakhulu.
13 UKUZEZA UMNYANGO
Ukuba awuyiboni ithegi yovavanyo, hlaziya isicelo sakho se-Instagram. Ukuba ithegi isasilela, phuma kwisicelo se-Instagram uze ungene kwakhona. Ngethemba, i-tag yovavanyo iya kuvela kweleyibheli.
NINI kwaye USETYENZISWA NJANI I-STICKER Quiz INSTAGRAM
Ungasebenzisa itekisi entsha yovavanyo kwizinto ezahlukeneyo ukubona ukuba abalandeli bakho bazi kangakanani ngawe (okanye enye into). Amanqaku angayisebenzisa kwimincintiswano kunye nokunika.
Siza kusebenzisa i-tag entsha yovavanyo rhoqo kwiTekhnoloji yethu ekhokelayo esemthethweni, ukuKhokela iTekhnoloji yeMidlalo kunye neeAkhawunti zeTekhnoloji ye-Hindi ye-Hindi. Ke hlala ubukele.
Okulandelayo: Ngaba ufuna ukongeza umfanekiso ku-Instagram ukuqaqambisa ngaphandle kokongeza ibali? Jonga iposti ukuze wazi ukuba ungayenza njani.
1 1 YINTONI ISIQINISEKISO SEXESHA?
2 2 USETYENZISWA NJANI I-SIZER Quiz KWI-INSTAGRAM
3 3 Thumela IGAMA LOMNQOPHISO
4 4 IIMPENDULO ZONGEZIWEYO
5 5 KHETHA IMPENDULO
6 6 UTSHINTSHO UMQOQO WEKHODI YENKOLO
7 7 UKUZIPHATHA KUNYE NESICWANGCISO SESIQINISEKISO
8 8 Guqula ISIMPENDULO sakho
9 9 BONA IIMPENDULO ZAKHO BALANDELAYO
10 10 LUYAVUYALASELWA NJANI I-LABEL YOKUHLAZIYWA KOKUGQIBELA KWABASEBENZI
11 11 IYAHLUKANYISELWE NGALO MBUZO WEMIBUZO
12 12 Yongeza IZIQULATHO ZABANINZI
13 13 UKUZEZA UMNYANGO
14 NINI kwaye USETYENZISWA NJANI I-STICKER Quiz INSTAGRAM
Meyi 4, 2019
Umguquli weYouTube: Yintoni kwaye isebenza njani